Ezothando Nezocansi - Thola Online
Indebe yokuya esikhathini
Elena Recio Okthoba 7, 2019 Ezempilo, Ubulili Awekho amazwana
Cishe uke wezwa ngendebe yokuya esikhathini. Sonke sinalowo mngane wezemvelo oxolisa indebe. Futhi, uma usudlula amakhampasi ...
Ungazibala kanjani izinsuku ezivundile
Elena Recio Okthoba 7, 2019 Ukukhulelwa, Ubulili Awekho amazwana
Ukwazi ukubala izinsuku ezivundile akunzima. Uma uhlela ukukhulelwa noma, okuphambene nalokho, futhi ufuna ukuba nezinsuku ezivundile ezilawulwa kahle, sizokutshela kanjani. Ngoba ...
Ngubani ongakaze esabe ukuba nesikhunta sangasese. Uma ucabanga ukuthi kungenzeka ukuthi uhlushwa yibo, sikutshela okufanele ukwenze ukubaphatha nokuthi yini ongayenza ukuze ungaphindi uqhubeke. ICandidiasis ...
Ukuya esikhathini, isikhathi noma inkathi ukopha kowesifazane okuthi njalo ngenyanga, kuqhume futhi kushiye ubufazi besifazane. Ukuya esikhathini kuvela kwezicubu ezingaphakathi ...
Ungayibeka kanjani i-tampon
Indlela yokubeka i-tampon ngumbuzo sonke esizibuze wona lapho sinemithetho yethu yokuqala. Ngakho-ke, sizokutshela ukuthi ukwenze kanjani ngendlela ...
Kungenzeka ukuthi uke wabona umbusi wakho onsundu wazethusa. Uma kunjalo, yehlisa umoya. Ukubusa oku-brown kuvamile, kumane kungenxa yokuguqulwa kwe ...
Elena Recio Septemba 26, 2019 Ezempilo, Ubulili Awekho amazwana
Namuhla sifuna ukukhuluma ngesikhunta sowesifazane sangasese, ngoba ubusibuza ngesikhunta ku-clitoris kanye nezinye izinhlobo zokudlondlobala kwamagciwane. Ngakho-ke, sizokuxazulula lokho abayikho ...
Indebe yesitho sangasese sangasese noma eyeyesifazane isiyaqala ukuba yindawo ebaluleke kakhulu yama-tampons kanye ne-compress. Kunezizathu eziningi zokuya endebeni yesitho sangasese sowesifazane, kodwa ...
Elena Recio Septemba 22, 2019 Ezempilo, Ubulili Awekho amazwana
Uma uthele futhi umthetho kufanele ungafiki okwamanje, kungenzeka ukuthi wethula lokho okwaziwa njengokuphuma kwegazi okuphakathi, ukopha kwe-ovulation noma ukubala. Abesifazane abaningi ...
Ukulunywa kwe-Vaginal noma ukucasuka kuvamile kakhulu kunokuba sicabanga futhi kungaba nezimbangela eziningana. Ukwethula impilo enhle yesitho sangasese kubalulekile ngoba kuyinkomba ...